Iray amin'ireo tombony azo amin'ny fiainana sy miaina orinasam-pandraharahana, toy ny fandidiana an masoivoho mailaka, dia ny fahafahan'ny tsirairay misaintsaina izay mety hitranga amin'ny ho avy.
Ity manaraka ity dia fahitana amin'ny ho avy ny amin'ny ho fahitana ny marketing amin'ny mailaka amin'ny taona 2017 ho an'ny mpampiasa, ny mpivarotra ary ny mpanjifa.
Niova ny anaran'ny lalao
Mandrosoa haingana enina taona ary ny teny hoe "marketing mailaka" dia nanjavona tamin'ny fiteny vernakular antsika tanteraka. Na dia ambany noho ny 2011 aza dia mbola mamokatra ROI be ny marketing amin'ny mailaka; na izany aza dia fiara marketing nomerika iray fotsiny izy io.
Amin'ity ho avy ity, ny fampidirana eo amin'ny marketing ara-tsosialy, finday, misy ny toerana ary ny trano an-trano dia milamina. Ny fantsona fandefasan-kafatra isam-batan'olona dia tsy misy dikany.
Misy nuances kely amin'ny famoahana hafatra mahomby amin'ny alàlan'ireo fantsom-barotra tsirairay ireo, saingy ireo fahasamihafana ireo dia tarihin'ny safidin'ny mpanjifa voarakitra an-tsoratra fa tsy ny fomba fandefasana mihitsy. Ny lahasa voalohany amin'ny fampiasana ireo fantsona mifangaro ireo dia mitovy amin'ny tamin'ny 2011: ny fizarana hafatra mifandraika sy ara-potoana. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny tanjona dia, ary efa hatrizay, ny fametrahana ny tolotra mety, eo imason'ny olona mety, amin'ny fotoana mety.
Satria ny teny marketing amin'ny mailaka, ny marketing ara-tsosialy ary ny marketing amin'ny finday dia namepetra loatra ary nanjary nanafintohina ny mpanjifa reraka ara-barotra dia voatery nandeha izy ireo. Tongasoa eto amin'ny taonan'ny Hafatra nomerika.
Ny fiovana lehibe indrindra amin'ny Hafatra nomerika maoderina dia tsy ny fomba nanondroana azy; ny fananganana sy fanamafisana ny haitao, ny filàna mpiasa mahay ary ny fahatsapana sy ny fanomezan-danja ny mpanjifa.
Haingam-pandeha sy nifaoka ilay fiovana
Tamin'ny taona 2017, Mpanome hafatra nomerika (DMPs) dia afaka mizara hafatra ara-barotra manokana ho an'ny fitaovana, ny fotoana ary ny habaka. Izy ireo izao dia mandrakotra ny serasera amin'ny fotoana tena izy, mampifanaraka izay mivezivezy mora foana amin'ny fantsona vaovao, toy ny fahitalavitra mifandraika, sy ireo taloha, toy ny varotra ambongadiny. Saingy ny fehezan-kevitry ny DMP dia tsy voafetra amin'ny fanaparitahana sy ny fanarahana ireo hafatra momba ny marketing nomerika ihany. Nahavita fandrosoana nahagaga tamin'ny famakafakana data sy ny automatisation marketing izy ireo.
Ny tatitra sy ny famokarana fampielezan-kevitra koa dia marani-tsaina sy mahomby kokoa, tsy mihoatra ny fisokafana sy tsindry ary mpanonta WYSIWYG. Mieritrereta mivantana, fanandramana sy fanodinkodinam-batana marobe, fanangonana votoaty dinika marobe, fanaterana mavitrika, ary fika amina loop loop ROI amin'ny 10th fahefana.
DMPs koa dia manolotra fomba matanjaka amin'ny fanangonana angona. Ity tahirin-kevitra manankarena ity dia mivoaka avy amin'ny fifandraisana rehetra; manomboka amin'ny famandrihana tsotra amin'ny fitaovana finday ka hatramin'ny angona momba ny fitondran-tena nangonina avy amin'ny findain'ny mpanjifa ivelan'ny Internet.
Fa ahoana no fomba nivoaran'ny doka haingana an'ny DMP? Tamin'ny taona 2012, ny Mpamatsy tolotra mailaka (ESPs) mikororosy, Google-style, hitazomana ireo mpivarotra ao anatin'ny interface-ary ny interface fotsiny ihany. Hazakaza-piadiana teknolojia sy faharanitan-tsaina avy eo.
Ny vidin'ny vidiny ambany sy ny fahefana vaovao
Ny dikan'ity adin'ny Digital Messaging ity ho an'ny mpivarotra isan'andro dia ny fihenan'ny vidin'ny serivisy fandefasan-kafatra nomerika ary nanomboka nihatsara haingana ireo fitaovana. Mazava ho azy fa vaovao tsara ho an'ny mpivarotra fa ho an'ny Mpanome hafatra nomerika, satria ny fanamafisana sy ny fahazoana vola be dia be izay nanova ny indostria mandrakizay.
Amin'ny iraka ampidirina ao anaty fampidirana ireo endri-javatra rehetra notakin'ireo mpivarotra, ny Mpanome hafatra nomerika nanomboka nahazo orinasa mpanara-maso ny haino aman-jery sy ny angon-drakitra. Nanakarama ireo atidoha mpandinika sy manam-pahaizana momba ny UI izy ireo. Nanokatra ny fangatahany ho an'izao tontolo izao izy ireo ary nanamboatra kinova vaovao isaky ny telovolana. May izy ireo.
Ireo DMP kely sy antonony dia tsy afaka nanaraka ny hafainganana sy ny fihenan'ny vola miditra. Notorotoroina na natelina izy ireo. Ny mpamatsy ny Niche dia nahemotra ho an'ny add-ons. Ho an'ny tsena iray izay tototry ny mpifaninana an-jatony taloha, dia behemoth eran'izao tontolo izao sisa tavela.
Ny DMP maoderina dia miteraka karama firy ho an'ny mpanjifa mihoatra ny taloha. Na izany aza, midadasika be ny refin'izy ireo ka, raha tsy ny lobbyista sy ny torolàlana henjana mifehy tena, ny mpisolovava amin'ny fanoherana ny fitokisana sy ny fiainana manokana dia manomboka liana amin'ny asan'izy ireo.
Nahita fidiram-bola vaovao ihany koa izy ireo, ka ny amboniny dia azo avy amin'ny fahazoan-dàlana ny angon-drakitra ampiasain'izy ireo. Ity faharanitan-tsaina ity dia atolotra ary atakalo amin'ireo orinasam-pikarohana sy fantsom-barotra amin'ny fifaninanana toy ny karoka, mailaka mivantana, ary doka nomerika.
Ny fiakaran'ny mpanao asa tanana sy ny teknisiana
Ireo fitaovana feno, natolotry ny Mpanome Hafatra nomerika amin'ny 2017, dia azon'ny sain'ny mpivarotra rehetra izao. Na izany aza dia be pitsiny kokoa ireo programa fandefasan-kafatra nomerika. Ireo mpiasa mahay no mampiavaka ny programa izay miteraka ROI mahantra, tsy misy antonony ary miavaka amin'ny Digital Messaging, saingy araky ny filazan'ny tantara antsika dia tsy ny manam-pahaizana manokana no hanao izany.
Satria matanjaka sy azo ampiharina ny fanaovana tatitra, dia tsy mila mpanao matematika ao an-trano na any ivelany intsony ireo mpivarotra hamakafaka ny angona sy hanome tolo-kevitra. Na izany aza tsy maintsy ampiharina izao angon-drakitra izao ary tokony hohatsaraina ny programa. Ny vatolampy an'ny indostrian'ny Hafatra Digital dia latsaka anaty toby roa, mpanao asa tanana ary teknisiana roa.
Ny mpanao asa tanana dia ireo izay mamorona ny drafitra sy manatanteraka azy; na mpandinika, na mpitantana, na mamorona. Ireo teknisianina dia ireo izay mamantatra ny olana, izay manomboka amin'ny fivelarana haingana ka hatrany amina hiccup integrations ary manitsy azy ireo.
Fihetsika sy fahatsapana ny mpanjifa
Ny mpanjifa izao dia mahatsapa tsara ireo hafatra marketing marobe, nefa misy ifandraisany, izay manodidina azy ireo. Izany dia nanery ny mpivarotra hivadika, inona indray mandeha, tolotra ila-tokana ho fifanakalozan-kevitra mifantoka amin'ny mpanjifa. Ireo fifanakalozan-kevitra ireo dia atao amin'ny sehatra iray na amin'ny iray na eo amin'ny vahoaka virtoaly. Mivoatra izy ireo rehefa mandeha ny fotoana rehefa miova ny demografika sy ny fitondran-tenan'ireo mpanjifa ary miova arakaraka ny fomban'ny kolontsaina.
Ny data izay omen'ny mpanjifa, ary nalaina avy amin'ny fihetsik'izy ireo, dia tsy misy fetrany ankehitriny. Ny mpivarotra dia toa manana fahitana tsy manam-petra momba ny sain'ny olona ary koa maodely azo vinavina amin'ny kilasim-bahoaka. Mampiasa ity fampahalalana ity ny mpivarotra mba hanaterana izay mety hovidin'ny mpanjifa ankehitriny, sy amin'ny ho avy, ary koa maminavina ny lanjan'izy ireo mandritra ny androm-piainany ary avy eo manokana ireo loharanom-bola sahaza azy.
Satria mahatsapa fatratra ny varotra fitondran-tena ny mpanjifa ary miahiahy sao ho lasa manafika be loatra ilay fampiharana amin'ny farany; vao tsy ela akory izay dia nametraka ny toeram-pivarotana fahazoan-dàlana an'ny tompony manokana, antsoina fotsiny hoe Choice.
Ny Choice dia ivontoerana fiaraha-miasa, fitantanana data ary ivom-pifandraisana izay azo antoka sy manana ny fahefana rehetra. Izy io dia hahafahan'ny mpanjifa mifehy, mazava tsara, izay karazana data angonina, ary ampiasain'ny mpivarotra sy ny hafatra horaisin'izy ireo, avy amin'iza, ary koa ny fomba sy ny fotoana hanaterana azy ireo.
Serivisy maimaimpoana ho an'ny mpanjifa izany fa ny Mpanome Hafatra nomerika dia tokony hanome fahazoan-dàlana izany vaovao izany, hiantohana ny fanatanterahana ny andrasan'ny mpanjifa sy hanaraka ny Lalàna momba ny fiarovana ny fiainana manokana nomerika amin'ny 2015.
Ny famadihana andraikitra
Tamin'ny taona 2017 dia nivadika ho azy avokoa ny indostrian'ny Digital Messaging. Tamin'ny andro voalohan'ny marketing amin'ny mailaka, ny anjaran'ny liona ny vidiny, ny fotoana ary ny fiheverana dia nandeha tamin'ny rindrambaiko marketing mailaka. Saingy ankehitriny rehefa namboarina ny serivisy DMPs, ny tena sandan'ny Digital Messaging dia miankina amin'ny talenta izay mampiasa ireo fitaovana ireo ihany.
Ity fanodinana andraikitra ity dia hita taratra amin'ny fifandraisan'ny mpivarotra sy ny mpanjifa ihany koa. Ireo mpivarotra ankehitriny dia mailo kokoa amin'ny filan'ny mpanjifa sy ny vinavinany. Raha te hanohy ny resaka amin'ny taona ho avy izy ireo dia tsy maintsy. Ary ho takalon'ny fampahalalana mombamomba azy ireo manokana, ny mpanjifa dia mahazo tolotra noforonina manokana sy avo lenta ary fanandramana fanaraha-maso ny fiainany manokana tsy mbola nisy toy izany.
Tags: fampiasana demografikampamatsy hafatra nomerikahetsika fiarovana ny fiainana manokana nomerikadmpmailaka Marketingmpamatsy tolotra mailakapaikadin'ny mailakaESPlanja mandritra ny androm-piainana
Eto ny Youtube Analytics
Ny poketra nomerika sy ny ho avin'ny fandoavam-bola
Dec 2, 2011 amin'ny 4: 46 AM
Heveriko fa tao anatin'ny 10 taona ny marketing mailaka dia tsy hisy intsony ary ny hafatra dia hahatratra ny mpanjifa amin'ny fomba samihafa.
Dec 5, 2011 amin'ny 10: 07 AM
Salama Vaidas - Azo antoka fa hahaliana ny mahita izay hitranga amin'ny ho avy, indrindra ny ho toa ny fandefasan'ny hafatra nomerika. Amin'ireo lahateny 'maty mailaka' rehetra dia tsy irery ianao amin'ny fieritreretana fa hivadika amin'ny fantsona hafa ny mailaka.